WhatsApp Ọrụ Otu maka Ọrụ Middle East
WhatsApp Ọrụ Otu
WhatsApp Ọrụ Otu esi eji ya?
WhatsApp Otu Ọrụ dị iche iche na-enyere gị aka ịchọta ọrụ ohere karịrị Dubai na Ụlọ ọrụ Dubai City Otu WhatsApp. Dị ka eziokwu, ndị na-achọ ọrụ ugbu a nwere ike isonyere ndị mbanye WhatsApp ọrụ otu na Dubai na Abu Dhabi. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ị ​​nwere ike isonyere otu anyị ugbu a wee bụrụ onye mbịarambịa na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Explọ njem ọ bụla nwere ike ịghọ onye nwere obi ụtọ nke ndị na-achọ ọrụ na-akpọ ndị otu na Middle East. You nwekwara ike ịchọta ohere ọrụ dị ịtụnanya na Dubai City site na iji nke anyị Njikọ WhatsApp Otu na Dubai. Yabụ na site n’uche a, ụlọ ọrụ anyị ekepụtala ọtụtụ ndị ọrụ WhatsApp maka ndị na-achọ ọrụ. Ebumnuche anyị bụ ijikwa ibe WhatsApp ọrụ na ọrụ ịnwetara ekwentị maka ndị si mba ọzọ. Iji kwu eziokwu ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ na-eziga arịrịọ ahụ n’otu anyị. Anyi no n’olileanya na ndi oru ngbasa ozi nke igwe mmadu anyi ndi mmadu ga - eji otu ha nweta oru UAE. Searchingchọ ọrụ ahụ na-ewe oge. Yabụ, iji mee ka ọ dị mfe ịmalite ịchọ ọrụ na otu Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi WhatsApp.
WhatsApp Njikọ dị iche iche
WhatsApp Otu Njirimara ịkpọ oku ịkpọ oku dị mma nke ukwuu maka ndị ọbịa What App. Companylọ ọrụ anyị emeela ìgwè dị iche iche ma nyere ndị ọzọ aka nanị site na ịpị njikọ njikọ oku na ha niile nwere ike ijikọ ọnụ. Maka nke a, ụlọ ọrụ anyị na-ebute ndị ọbịa na weebụsaịtị anyị. Maka otu jikọọ onwe gị. Daysbọchị ndị a na - eji WhatsApp nwere ike isonyere ọtụtụ otu na ibe ụlọ ọrụ anyị. N'oge a, onweghị onye chọrọ nkà IT ọ bụla. Can nwere ike sonyere otu anyị taa. Onye isi nchịkwa anyị nwere ike ijikọ gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji otu njirimara biko biko jikọọ anyị ma biko chọọ Ọnọdụ WhatsApp. N'okpuru ọnọdụ ndị a, ọ bụrụ na ị na-achọ ndị enyi App App ọhụrụ, ị kwesịrị ịgụ akwụkwọ anyị. Kemgbe WhatsApp chat nwere bipụtara atụmatụ a dị ịtụnanya maka mmadụ niile. Kama nke ahụ, WhatsApp ghọrọ usoro ọhụrụ ịchọta ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ijikwa ya ọkachamara. Ma ọ bụ n'aka nke ọzọ, naanị ịchọta ezigbo ndị enyi n'ịntanetị. Ka emechara, ọtụtụ ndị mmadụ malitere ịchọ WhatsApp Groups Link Online. Mgbe obere oge gachara WhatsApp maka android buru ibu echiche ohuru !. Inwere ike ịkpọ ndị mmadụ ka ha nye a Òtù WhatsApp Kpaa nkata site na njikọ anyị nyere anyị !. Na ụzọ ọ bụla, anyị na-amalite inwe ọtụtụ ndị ọbịa mba ofesi na ndị otu anyị. Ma ihe dị mkpa iji ghọta bụ na ọ nwere ọtụtụ ndị nwere mmasị na-achọ ịbanye na ọtụtụ ndị Otu na WhatsApp na Linkedin yana Facebook. N'akụkụ dị mma, anyị na-ede edemede metụtara WhatsApp njikọ maka onye ọ bụla. Kpamkpam, anyị ga-ekpuchi ụfọdụ nhọrọ WhatsApp nkata dị mma ị nwere ike iji. N’iburu nke a, n’uche, anyị ga - ekwu n’ezie okwu banyere Facebook na Njikọ Njikọ Njikọ na edemede anyị.
WhatsApp Ọrụ Otu dị na Dubai
Ihe ọzọ dị mkpa n'ime anyị Whatsapp Dubai Ọrụ na Ịbanye na Dubai ahia ahia onwe onye. Anyị na-eji WhatsApp maka ịre ahịa ịntanetị. N ’isi, iji zipu ozi ma nyere ndi dinta aka ichu ndi choro ego ọrụ Dubai Obodo. Na nyocha nke ikpeazụ ego ole iji anyị WhatsApp adịchaghị Ọrụ na ọrụ Dubai. Ọ bụ n'efu. Emere oru a maka ndi okacha amara nke mba uwa. Maka ederede ederede mba ụwa na ịchọrọ ọrụ na Middle East. Iji ichikota, ị nwere ike biputere CV na akara ekwentị gị. Ugbu a, anyị mere nke anyị WhatsApp na-akpọ Otu a na - ahụta igwe na - ewu ewu na Facebook na LinkedIn. N'aka nke ọzọ, anyị nwere olile anya na ị ga-esoro ụlọ ọrụ anyị. N'ihi na-enyere ndị ọzọ na-achọ ọrụ na karịsịa dị ka anyị Dubai WhatsApp ọrụ nkata ụka. Maka n'aka nwere ike inyere ndị ọzọ aka ịbanye na UAE. Ọrụ anyị na-enyere aka n'izipụ ozi olu na ndị isi. Tinyere ịkekọrịta ahụmahụ gị. Maka nzube nke ịkwaga na Dubai maka ndụ nrọ.
Malite nhazi Chat Group
Anyị na-ebipụta ọtụtụ nchịkọta dị iche iche n'oge na-adịbeghị anya. Ya mere i nwere ike isonyere oge ọ bụla ị chọrọ ka anyị WhatsApp nkata nkata. N'akụkụ na-adịghị mma, a na-ewerekarị ọtụtụ chatsịlị WhatsApp. N'ihi na WhatsApp amachi otu. N'okwu ahụ, ndị mmadụ na-achọ njikọ njikọta oku WhatsApp Group maka mmadụ niile. Ka anyị na-ekwupụta n'akụkụ adịghị mma, ọtụtụ ndị otu ị ga - achọta ha zuru ezu zuru ezu. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ njikọ adịghị mma maka ndị ọrụ n'ihi na ị gaghị enwe ike iji ya ma sonyere ya maka gị na ndị ọzọ ịkparịta ụka. Maka nke a, ụlọ ọrụ anyị kpebiri inye gị ohere. Mee elu mee ala sonyere WhatsApp Group nchịkọta njikọ. Otu WhatsApp anyi bu ihe di egwu ebe maka ndị ntanetị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye otu na weebụsaịtị anyị. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na ị ga-achọ ịgwa ndị ọzọ okwu. Ọ ga-amasị anyị inyere gị aka ka gị na ndị enyi ya na ndị ezinụlọ gị dịrị n'otu. Echiche dị n’etiti njikọ anyị na WhatsApp bụ inyere gị aka ijikọ ndị ọzọ. Nwere ike ikwunyere ndị mmadụ ị hụrụ n'anya n'ime WhatsApp Otu. Nwere ike ijikọ onye ọ bụla n’ime ezinụlọ gị. Mepụta ndị otu enyị ma zigara ya ụlọ ọrụ anyị. Mgbe ahụ kpọtụrụ ma ọ bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ ma ziga ụlọ ọrụ anyị ozi. Gbalịa ime ka ọ bụrụ obere ọrụ gọọmentị inwe onwe ha otu na Social Media. N'okwu ahụ, ịkwesịrị ileta ndị otu anyị, hụkwa ihe na-eme na ndị hụrụ anyị n'anya WhatsApp. Can nwere ike sonye ọtụtụ n'inyere ndị ọzọ aka ịga n'ihu. Na-amalite isoro ndị ọzọ na-emekọ ihe enyi WhatsApp ụbọchị niile ma ọ bụ na enwere ike inwe ebumnuche ọzọ.
Chọta ndị enyi WhatsApp
N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ụlọ ọrụ anyị dị ịtụnanya ga-enye gị otu nnukwu WhatsApp ọha ọha. Karịsịa maka ndị ga-achọ ịkpọ ndị ọzọ ịmalite njikọ n'etiti ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ị sonye na njikọ WhatsApp ndị ọzọ anyị nọ ebe a iji nyere gị aka pụọ. Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ha ekwentị mkpanaka ndị ọrụ. Can nwere ike ị ga-adị njikere ileta ebe kacha mma anyị dị n'ịntanetị maka ịme mkparịta ụka. Maka nke a, isiokwu nke mezuru na ọtụtụ puku WhatsApp Otu Njikọ. Nwere ike sonyere otu WhatsApp WhatsApp ịchọrọ naanị n'otu pịa site na njirimara njikọ njikọ. Companylọ ọrụ anyị na-agbasi mbọ ike ịkekọrịta nweta nkwalite WhatsApp ndepụta njikọ njikọta nnukwu. Dịkwa ka anyị chọpụtarala, ndị ọrụ ekwentị mkpanaaka niile ga-achọ nchịkọta a. N'ihi na ị nwere ike ijikọ ọnụ. Maka ụlọ ọrụ anyị, ọ bụ ọrụ siri ike, n'ihi na o were ọtụtụ oge. Naanị imepụta WhatsApp Otu maka onye ọ bụla. Ọzọkwa itinye anyị niile n'otu oge na-eme ka anyị rụsie ọrụ ike iji nakọta ndị ọhụrụ na ịntanetị. Ndị otu anyị mepụtara otu ahụ site na ụzọ dị iche iche. Ọtụtụ ndị ọrụ ọhụụ na-achọ WhatsApp Group Invite Links na everyntanetị kwa ụbọchị. Nwere ike ikwunyere ndị mmadụ ị hụrụ n'anya n'ime WhatsApp Otu. Nwere ike ijikọ onye ọ bụla n’ime ezinụlọ gị. Mepụta ndị otu enyị ma zigara ya ụlọ ọrụ anyị. Mgbe ahụ kpọtụrụ ma ọ bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ ma ziga ụlọ ọrụ anyị ozi. Gbalịa ime ka ọ bụrụ obere ọrụ gọọmentị inwe onwe ha otu na Social Media. N'okwu ahụ, ihe m hụworo, ndị hụrụ WhatsApp n'anya na-enwe mmasị isonyere ọtụtụ Ndị Otu iji soro ha nọ ọrụ ụbọchị niile ma ọ bụ na enwere ike inwe ebumnuche ọzọ. Echiche dị n’etiti njikọ anyị na WhatsApp bụ inyere gị aka ijikọ ndị ọzọ.
WhatsApp Otu sonyere otu
Otu WhatsApp na ulo oru Dubai City - Ourlọ ọrụ anyị na - enyere ndị mmadụ aka ịmalite WhatsApp otu nkata sonyere na Middle East. Dika odi, ị nwere ike iji ekwentị anyị ugbu a. Na isoro ndi otu anyi WhatsApp kwurita ka ha buru enyi ohuru. Ndị njem ọ bụla nwere ike ịchọta ọrụ ọ ga-ahụ n'anya. Can nwere ike iji ọrụ anyị gosi Gbanyụọ nkà gị na United Arab Emirates. A na-eji ngwa ekwentị a elu ụwa niile. Kparịta ụka na WhatsApp bụ otu n'ime ọkwa kachasị elu na azụmahịa obodo. Gbanwe uwa di nkpa dika ihe nkwalite teknụzụ maka uwa a. Yabụ na site na nke a, anyị kpebiri inyere gị aka ntakịrị. Ma were usoro iji ohere nke IT wee gaa n'ihu. Otu egwuregwu WhatsApp bu otu maka ndi mmadu nwere ezi amamihe.
Jikọọ na ndị kasị mma IT na ụwa
Ihe nwere mmasị na Whatsapp. Na i nwere ike chọta oru na WhatsApp n'elu Linkedin. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị kasị mma na IT. Enwere nhọrọ dị ịtụnanya ole na ole. N'oge ugbu a, ị nwere ike ọbụna Chọọ maka Ọrụ na IT Na Harvard. Ngwa a bụ otu n'ime ndị kasị nwee ọgụgụ isi n'ụwa. Ya mere, ị ga-atụle Whatsapp dị ka ezigbo isi iyi nke nyocha na Dubai. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ ntanetị ọrụ iche iche nke Twitter. Ị ga-akpọtụrụ ọtụtụ ndị mmadụ na Mahadum Harvard. Ha nwere ike inyere gị aka tinye na WhatsApp Community. Ụlọ ọrụ ahụ na-eto ngwa ngwa karịa Facebook na Linkedin n'onwe ya.
Harvard nyochaa maka ndị ahịa WhatsApp
Harvard nyocha dere banyere ihe ndị ahịa chọrọ ịma banyere ngwa nkata WhatsApp. Ndị ọrụ Whatsapp kachasị mma maka ịkwalite nkwukọrịta nkwado na ngwa mkpanaka dị ịtụnanya. N’aka ozo, Harvard inyere ndi mmadu aka blog maka nkwukọrịta ma kparịta mmepe WhatsApp n'ọdịnihu. Nwere ike ịchọta uru na njikọ aka kpọmkwem. N'agbata Harvard na WhatsApp. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ a na-eme ka ụwa mepere emepe ma jikọta ya. Na Harvard jikwaa nyocha banyere WhatsApp Ngwa. Ya mere ị ga-enwe mmasị ịnweta ozi gbasara Harvard na WhatsApp. Ya mere, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọ bụrụ na otu n'ime ụlọ akwụkwọ kachasị mma na ebe mmepe. Na-akwalite WhatsApp maka ụmụ akwụkwọ ha. Ị ga-agbalị Gaa Whatsapp.
Nwee anya na ọtụtụ WhatsApp Group Links
Sonye WhatsApp Taa !. WhatsApp ka na-eto kwa ụbọchị. Ngwa ekwentị na-ewu ewu kwa ụbọchị. Companylọ ọrụ a na-agbakọ ọsọ ọsọ na njikọta ọnụ. Nwere ike inweta ndụmọdụ dị mfe n’aka ndị na-ewe ha n’ọrụ. Nweta ọrụ a na-akwụ gị ezigbo ụgwọ na isi mmalite ego ị na-enweta. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara ụzọ ọhụrụ iji gwa onye ọ bụla nọ na mbara ala okwu. N’ezie enweghị ịtụ ego ọ bụla maka ya. Kemgbe ngwa ahụ bidoro ọrụ. Ihe karịrị ndị ọrụ ụlọ 1 ijeri ụlọ na-amalite ijikọ ibe ha. Ugbu a, WhatsApp na-arụ ọrụ na mba 180. Ọ bụ ngwá ọrụ ewu ewu maka ịnwe ndị ọrụ na Eshia na Middle East. Ndị nchịkwa ego na-eji WhatsApp nọrọ na-akpọtụrụ ndị chọrọ ime ha. N'ihi na ọ dị nfe ma dịkwa irè. Iji maa atụ, inwere ike inyocha ma ọ bụrụ na ndị na - ewe ndị na-ewe ndị ọrụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ ndị sonyere nọ n'ọrụ Na akụkụ dị mma mgbe ha na-arụ ọrụ n'oge ikpeazụ. WhatsApp can nwere ike iji rụọ ọrụ ndụ kwa ụbọchị dịka ịgwa ndị enyi na ezinụlọ gị okwu. Mana anyị nwere ihe jikọrọ ị na-achọ njikọ ọhụrụ ọ bụla oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
WhatsApp maka ndị ọrụ ntanetị ụwa
Ngwa ngwa WhatsApp abụghị naanị n'efu maka onye ọ bụla na-eji ekwentị mkpanaaka. Ma ngwa ngwa mkpanaka a na-arụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla na mba ọ bụla. Maka ụlọ ọrụ a, enweghi njikọ ọ bụla na njikọta njikọta dị ala. Maka otu narị pasent n'efu maka onye ọrụ ọ bụla. Ụlọ ọrụ ahụ na-eme ka ọ dị mfe maka onye ọrụ ụwa. Na Whatsapp, ị nwere ike ịmepụta otu ndị a tụkwasịrị obi. Kpọtụrụ ndị ọzọ n'ebe ọ bụla ị nọ. Maka ụlọ ọrụ ndị ọrụ na-emepụta nhọrọ ole na ole. Ebee ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịnweta otu ọrụ dị mfe na nchekwa. Mana ndị mmadụ na-elele mgbe niile ịkekọrịta ihe ndị kachasị amasị. Na mmechi, ị nwere ike izipu ozi dị mkpa na weebụsaịtị ha. Ma ọ bụ ọbụna gbute otu mbanye. Naanị zipu ngwa gị ka ịchọta ndị ọrụ WhatsApp. Biko biko jikọọ na ndị otu ha na-ewe ndị ọrụ. N’aka nke ozo biko kesaa CV gi. Onweghi ebe i si bia. WhatsApp nwere ike nweta ohere njikọ free nke ịtụnanya na WhatsApp.
Ndepụta ndepụta ndị dị na WhatsApp
Ndị otu anyị anakọtara ọtụtụ WhatsApp Group njikọ. Ebe ọtụtụ mmadụ nwere ike sonye ozugbo. Na-ekwu maka otu dị iche iche si n'akụkụ ụwa niile. Ọzọkwa, anyị ekekọrịtawo ha niile n'isiokwu anyị. I nwekwara ike ịkekọrịta njikọ njikọ WhatsApp gị. Ma tinye otu WhatsApp gị na weebụsaịtị ụlọ ọrụ anyị. Ihe ị ga - eme bụ ịgakwuru m onye kere WhatsApp ma tinye m w WhatsApp otu. Na ngalaba a, anyị ga-agbakwunye ndị otu gị na ntanetị weebụ anyị na-esote. Ebumnuche anyị bụ ka anyị nwee ọtụtụ ndị dị iche iche ma tinye njikọ otu na nchịkọta otu anyị. Anyị kwenyere na ọ kachasị mma na echiche kachasị mma mgbe niile. Dabere na otu mmepe mmepe anyị. Ndị ọrụ anyị hụrụ ya n'anya, ha niile na-agbakwunye ekwentị na otu ahụ. Ọ bụ ya mere ndị na - agụ akwụkwọ anyị ji nwee mmasị isonye na nchịkọta anyị ugboro ugboro site na mgbasa ozi mgbasa ozi anyị. N’ikpeazụ, ndị ọhụụ na-enwe mmasị isonye n’otu ọ bụla. Na ikarị n’arita ụka. Knowsnye maara na ị nwekwara ike ịdị njikere iji zute ndị ọzọ n'ịntanetị. Ma, ọ bụrụ n’ị bụghị otu n’ime ha. Gbalịa inweta onwe gị ntakịrị karịa ma jikọọ anyị. Dịka ọmụmaatụ, Ọ bụrụ n’anyị ejighị n’aka ebe ị ga-esonyere dịka onye ọrụ na onye na - agụ Whatsapp ọhụrụ. Echegbula na anyị ga-enyere gị aka. Anyị emeela ka ozi WhatsApp dịrị gị njikere ma nwee olile anya ka ihe riri ahụ. Companylọ ọrụ anyị nwere ike ikwere gị nkwa na ị ga-ahụ ọmarịcha ihe ịtụnanya a maka nchịkọta otu nkata. Na onye obula nwere ike iso ya n’oge obula. Na-enweghị imefusị oge gị dị oké ọnụ ahịa, ka anyị bịarute na peeji nke anyị na isi ihe dị na peeji a. ANA nweta bọọlụ na-agba ọsọ.
Gaa na nke ọhụrụ anyị Ọrụ na Dubai Iche iche
Chọta a nrọ ọrụ na Dubai na Citylọ ọrụ Dubai City. Nke bụ eziokwu na ọnwa ole na ole laghachiri, otu n'ime ndị na-achọ ọrụ anyị si India hụrụ ọrụ dị ịtụnanya na Dubai City. Mgbe ahụ ụlọ ọrụ anyị malitere ịmalite Mmepụta WhatsApp ọhụrụ na UAE. Kemgbe ahụ, anyị emeela otu Whatsapp maka International expats. Anyị emeela ka mmata na Middle East maka App maka obere ulo oru na oru na ibe akwukwo WhatsApp. Ebe ị nwere ike ịchọta ọrụ mbanye ekwentị na mba Gulf. N'otu oge ahụ na olile anya na onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-achọ ọrụ ga-eji ya ụzọ ziri ezi. Yabụ kedu ihe ị ga - eme? Zipu nke gi Nọmba ekwentị mkpanaka ndị otu anyị, na ụzọ mkpirisi ị nwere ike itinye ọkwa ị na-achọ ịchọta. Nweta ego gị nyocha oru mee ngwa ngwa site n'ịgwa ndị ọzọ okwu. Ọzọkwa, gbalịanụ igosipụta nnweta gị maka itinye akwụkwọ na UAE. Site n'otu akaebe ahụ, ịgaghị mkpa itinye ọtụtụ awa kwa ụbọchị ịchọ ọrụ ọhụrụ na Dubai. Naanị ihe ị ga - eme bụ naanị ilele Otu Ọrụ Ọrụ WhatsApp anya. Nweta ugwo oru obula site n'aka UAE na nloghachi. Companylọ ọrụ anyị na-anwa ime ka ọrụ Dubai ghara ịchọ obere nrụgide site n'inyere gị aka ijikọ ndị ọzọ.
dịkwuo 50% nzaghachi Tinye ekwentị na Dubai Recruiters
Ikwesiri izipu ekwentị gi na WhatsApp Group na Dubai na Abu Dhabi. N'oge na-adịghị anya, ọnụ ọgụgụ ekwentị gị wee bụrụ nke nje site na mkpọsa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na otu ndị na-ewe ndị ọrụ na Gulf na UAE. N'akụkụ dị mma, ndị ọrụ otu anyị ọ bụla ejirila okpukpu atọ nke onyinye ọrụ na-atọ ụtọ. Naanị, site na iji usoro nkata anyị WhatsApp. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọnọdụ Middle East. N'okwu a, ọnụego nzaghachi ndị ọrụ ga-abawanye ruo 50%. Iji maa atụ, onweghị ụzọ ị ga-esi hapụ ndị na - ewe ndị ọrụ n'ọrụ na UAE. Ọ bụrụ n’ị na-eji WhatsApp Otu dị na UAE. Ọzọkwa, echefula Bulite gị malitegharịa gaa n'ọtụtụ ọrụ. Ịnwere ike ịde ya na PDF faịlụ ma ọ bụ na ị nwere ike ọbụna ime foto foto gị CV ma tinye ya na ntaneti WhatsApp anyị. Mee ka ndị na-amụrụ ọrụ mara na ị na-achọ ịkwaga n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa. Anyị na ndị ọrụ anyị, ị nwere ike ịchọ na Gulf na Middle East ebe.
Chọta ọrụ na Dubai ụzọ ị chọrọ ịchọta!
N'ihi nke a, anyị na-emepe emepe ọhụrụ Dubai WhatsApp Groups maka onye ọ bụla. N'otu oge ahụ, ebumnuche anyị bụ ịbịakwute ndị na-achọgharị ekwentị ma jikọọ ha na gị. Karịa otu ihe dị mkpa nke iji oge gị rụọ ọrụ nyocha. Usoro anyị bụ 100% n'efu maka ndị ọ bụla na-achọ ọrụ. Otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka ndị na-aga ime mba ụwa ga-achọ ịbanye na Middle East. Gbalịa ka gị na ya kwurịta okwu onye so n'òtù nchịkọta onye ga - ekuru gị n'usoro ịchọ ọrụ na WhatsApp N'aka nke ọzọ, n'ụwa asọmpi nke mkpokọta ekwentị mkpanaaka 2018-2019 na Gulf. N'ezie, ịkwesịrị ịgba ọsọ ma kpọtụrụ ndị na-ewe ndị ọrụ ọsọ ọsọ. Site na sistemụ anyị, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị na-ewebata akwụkwọ na iduzi ndị were gị n'ọrụ. Nwere ike ọbụna ịgwa ndị ọzọ expats ma jụọ ha otu esi achọ a ọrụ UAE. Onye ọ bụla ọpụpụ ọhụrụ na-enweta ụfọdụ ozi bara uru site n'ọdịnihu ngalaba-ọrụ.
Kedu nwere ike WhatsApp Chat enyere gị aka?
Hụ mara igwe eji ekwu okwu na ndị mmadụ n'ọrụ si eme na usoro maka Ọrụ Dubai.
Mee ka ntinye aka gaa na 87% nzaghachi omume na UAE.
Jiri ozi ederede gaa na ndị isi iyi, nyochaa oge nyochaa & banye n'ụgbọ n'egbughị oge ọrụ na Dubai.
Jikọọ na nke ọzọ ọpụpụ ma soro onye ọ bụla kwurịta banyere ọrụ na-achọ Gulf.
Dubai City Company ugbu a na-enye ezi nduzi maka ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike ịnweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ n'ime United Arab Emirates ya na asusu gi.